May 2021 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို‌ ကောင်းမွန်စေတဲ့အစားအစာများ ၁။ ကမာဟင်း ခရုကမာကောင်တွေမှာတော့ zincဓာတ်မြင့်မားစွာပါ၀င်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါများဆီကို အထောက်အကူပြုတဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို တိုးမြှင့်ပေးစေနိုင်ပလတယ်။ Zinc ဓာတ်ကအထူးသဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ကမာမှာ အခြားအစားအစာတွေထက် Zinc ပါ၀င်မှုမြင့်မားပါတယ်။ Seafood မစားတတ်သူ‌တွေအနေနဲ့တော့ အမဲသား၊ဝက်၊ ဖရုံစေ့စတာတွေမှာ…
အလုံးကြီးချိတ်ပြီး အဆုံးကြီး မဆုံးစေလို
အလုံးကြီးချိတ်ပြီး အဆုံးကြီး မဆုံးစေလို “ဆရာ.. ဆရာ .. ဆေးခန်းထဲသို့ တကျော်ကျော်ခေတ်ခေါ် လို့ လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက် ချိနဲ့နဲ့ အဘတစ်ယောက်ကို လက်ကို ဆွဲပြီး ဝင်လာသည်။ ဆရာရယ် အဖေက မောမော နေလို့ အားမရှိဘူးနဲ့ တူတယ် ဆရာ”။…
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ 1. Allergy Fightersအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများတွင် allergic ဖြစ်ခြင်းနှင့် asthma ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းကြောင်း လေ့လာချက်များ အရ သိရှိရပါတယ်။ 2. Date magnetsကြင်ယာဖက်တွေ့ခြင်းအတွက် အခြေခံကျတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကတော့ ခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။…
Anxiety Disorder and Old Trauma
စိတ်ပူပန်သောကလွန်ကဲခြင်းပြဿနာနှင့် ပြန်ပြင်မရသော ဒဏ်ရာဟောင်းများအခက်အခဲတွေ၊ ဖိစီးမှုတွေ၊ အတားအဆီးတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါမှာ စိတ်ပူပန်ကြတာ၊ စိုးရိမ်ကြတာဟာ သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းစိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိုးရိမ်ပူပန်လွန်ခြင်း ရောဂါ (anxiety disorder) ကတော့ သာမန်စိတ်ပူပန်ခြင်းမဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ ဘဝ လူမှုနေထိုင်မှုပုံစံကိုပါ…
စိတ်မှ ဖန်တီးသော ခြောက်ခြားစရာ ပုံရိပ်များ ( Hallucination)ဒီလိုစိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေမျိုးကို အရင်က တော်ရုံပြောပြဖို့ အစီအစဉ် မရှိပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရရော စီးပွားရေး အခြေအနေအရပါ ချို့ယွင်းလာတဲ့ အခြေအနေတွေ အရ လူတွေအများစုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု အတော်လေး…
ကလေးများတွင် တွေ့ရတတ်သော အာရုံစိုက်ရန်ခက်ခဲခြင်းပြဿနာ ( ADHD) အခုနောက်ပိုင်းကလေးမိဘတွေရဲ့ စကားသံတွေအရ ကလေးငယ်အချို့ဟာ အာရုံစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း (attention deficit hyperactivity disorder) (ADHD) ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဟာ တစ်နေရာမှာအာရုံစိုက်ဖို့…